Hiran State - News: Wararkii ugu danbeyey qilaafka Shariif Hasan iyo mudanayaasha baarlamaanka.
Wararkii ugu danbeyey qilaafka Shariif Hasan iyo mudanayaasha baarlamaanka.
HS:-Wararkii ugu danbeyey qilaafka Shariif Hasan iyo mudanayaasha baarlamaanka,halka gudi ka socda beesha caalamka oo ah kuwa gumeysiga cusub galiyey Somaliya ay Mogdihso u joogaan dantooda.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Mogdisho ayaa sheegaya in xaalada iyo qilaafkii baarlamaanka u halkiisii joogo kadib markii mudanayaashii xilka ka qaaday gudoomiyahii hore ee baarlamaanka xildhibaan Shariif Hasan ay go,aan ku gaareen in aan laga noqoneyn xil ka qaadistii ay ku sameeyeen.
Laakisne dalka Somaliya oo ah dal ku jira gumeysi casri ah waxaa isla maanta booqasho ku tagay wadamo iyo ururo si dadban iyo si toos ah u gumeysta shacabka Somaliyeed dhawrkii sano ee ugu danbeysana ay iyaga kaliya ka goday talada ugu danbeysa markii ay is qabtaan Somalida dhexdooda iyagoo hadba eeganayo maslaxadooda gaarka ah.
Dhacdooyinka la yaabka leh waxey tahay inuusan Somaliya maanta ka shaqeynin go,aan rasmi ah oo ka soo bixi kara mudanayaasha baarlamaanka waayo shaleyto waxaa lagu qasbay go,aano aan laga fikirin cawaaqibka ay keeni karaan iyadoona xukumad dhan oo dhisan oo uu horboodayo Farmaajo afka ciida loo galiyey iyadoo sidan oo kale wafti xaqiiqo raadin ah loogu diray Mogdisho oo ah halka ay isku heystaan mudanayasha baarlamaanka oo dhinac ah iyo beesha caalamka iyo Shariif Hasan oo isku dhinac ah.
Marka dhinac kasta laga eego xaalada Somaliya waa dal ku jira gumeysi casri ah waana dal ay maamulaan maskax aan aheyn shacabka Somaliyeed, taasi oo aad ka garan karto sida markasta oo ay wax yar dhacaan waftiyo kala duwan u handadaan hogaanka dalka iyagoo gooyni gooyni ula kulmayo.
Dhibaatada wadanka ka jirta ayaa waxaa lagu micneeyey in warbaahinta dalka ka howl gasha aysan shacabka u tilmaamin waxa iyaga dantooda ah, laakisne ay qoraan oo kaliya waxii markaasi ay arkaan amaba sida ay jecel yahiin kuwa dalka iyo dadka Somaliyeed galiyey jahwareerka siyaasadeed. sida ay wax u socdaan waxey meel ka dhac ku tahay qaranimada Somaliya dalkuna ma ahan runtii dal xor ah ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka Somaliyeed oo ku sugan Mogdisho goob joogna u ahaa markasta oo uu qilaaf soo kala dhax galo masuuliyiinta TFGda in mid mid loogu hanjabo oo ururo ay horboodayaan shaqsiyaad maalinkasta diyaarado ku tagaan caasimadii Somaliya iyagoo soojooga dhawr saac kadibna yiraahda waxaanu ka keenay Somaliya war bixin.
Ugu danbeyn waxey waxkasta is bedeli doonan sax iyo qaladba marka ku dhawaad 300 mudane go,aan ay gaaren la yiraahdo wax ka jiro ma leh oo Shariif Hasan waa gudoomiye baarlamaan taasi micnaheedu waa cidkasta oo ay mudanayaashu horey u doorteen ineysan aheyn sharci hadii aysanba qofkii ay doorteen markii lagu helo dhaliilo ay shaqada ka qaadi karin.
Marka xaqiiqada dib loogu laabto Shariif Hasan fowdada maanta taagan isagaa sabab u ah waana lama huran inuu u hogaansamo amarka mudanayaasha waaba hadii ay run ka tahay xil ka qadista ay ku sameeyeen maadama intooda badan lagu yaqaano kuwo is bed bedel badan oo aan marnaba leysku haleyn karin go,aanadooda maadama ay horey u ansaxiyeen go,ankii xilka looga qaaday Farmaajo ayna ku dhacday xukumadii markaasi dhisneyd waxii ka danbeyey shirkii Kampala Acord iyagoo u xilanayey waxoogaa dhaqaalo ah oo markaasi ka soo galayey labada Shariif, taasi oo beesha caalamka u xaqiijisay in aysan meesha joogin mudanayaal wadaniyiin ah oo dalkooda ka naxaya.
Arinta meel ka dhac ku ah shacabka iyo dalka Somaliya waa hogaamiye sheeganaya inuu yahay madaxweyne Somaliyeed oo ka amar qaadanaya shaqsiyaad hor boodaya ururo u muuqaal eg NGO weyna adag tahay qof wadani ah in dalkiisa lagu maamulo ayey leeyahiin jaaliyada qurbaha qaarkood oo aad u dhaliilsan hogaanka maanta hor boodayo koofurta Somaliya.
Dhibaatada shacabka Somaliyeed heysata markaad eegto xaalada hada uu marayo wadanka ma jirto wada shaqeyn rasmi ah oo ka dhaxeyso hogaanka sare.
Shiikh Shariif oo hor boodayo xildhibaano u badan kuwo taagersan Shabaab iyo Alqacida iney wadanka iska sii joogaan isagu ma leh siyaasad fadhisa oo ay la jaan qaadi karaan shacabka Somaliyeed wax ujedo ah oo ugaar ah waxa ka jiro sidii uu ku difaacan lahaa gursiga dhiiga badan ku taatay ee uu ku fadhiyo.
C/wali Gaas waxkasta isaga waxa uga muhiimsan sidii uu u qabsoomi lahaa shirka lagu wado inuu ka dhaco degaanada uu ka soo jeedo ee Puntland waa shir wasiirkii howshaas loo xilsaaray ee qorsheynta uu faraha kala baxay maalin cad kadib markii uu arkey ineysan ku jirin talada lagu maamulayo shirkaas shacabkii uu ka soo jeeday sidaasna uga gaabsaday howshii Road Mapka kadibna gudiyo jac bur ah ku dhawaaqay iyadoo ay horey u jireen gudiyo kale oo ka socday Dastuurka, waxuuna afkiisa ku qalalay shirka Garoowe wuu dhacayaa iyo wax la mid ah.
Shariif Hasan oo ahaa gudoomiyahii hore ee baarlamaanka aqli xumida heer uu marayo waxuu dagaal la galay mudanayashii isaga doortay waxuuna doonayaa iney mustaqbalka doortaan marka uu isku soo sharaxo xilka madaxweynimada Somaliya. marka wey wanaagsanaan laheyd in muwaadiniintaas aan kor ku soo sheegnay aanu ka qorno wax la taaban karo oo dalka iyo dadka Somaliyeed u roon laakisne ma jirto xaqiiqaduna waa midas.
Waxuu shaki badan ka taagan yahay beesha caalamka iyo shacabka Somaliyeed cida dalkaas iska leh oo go,aankiisa leh?
· admin on December 17 2011 16:29:28 · 0 Comments · 1683 Reads ·
14,633,634 unique visits